Muxuu Muuse Suudi ka yiri kursiga la boobay ee HOP067? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu Muuse Suudi ka yiri kursiga la boobay ee HOP067?
Waxaa Magaalada Muqdisho ku kulmay Senator Muuse Suudi Yalaxow iyo Jeneral C/raxmaan Tuuryare, kuwaasoo ka wada hadlay boobka lagu hayo doorashadda Gollaha Shacabka, iyo doorka ay ka qaadan karaan hakinteeda.
MUQDISHO, Soomaaliya- Muuse Suudi Yalaxow iyo Jeneral Tuuryare oo kulanka ay yeesheen uu albaabada u xirnaa, ayaa waxaa goob joog ka ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidankii badbaado qaran.
Muuse suudi ayaa dareen xanuun badan ka muujiyey dhabihii la mariyey kursiga uu Tuuryare u taagnaa ee Hop-067, oo iminka ku dhawaaqista natiijadiisa la hakiyey, kadib markii Hoggaanka Villa Somalia iyo kan Galmudug ay u xooggeen Yaasiin Fareey oo ah Taliyaha KMG ee NISA, kuna eedeysan dilka Ikraan Tahliil.
Sida ilo xog oggaal ahi ay sheegayaan, Labada nin ayaa intii uu socday kulankooda ka dhawaajiyey, in ay qaadayaan tallaabo haddii la hakin waayo doorashadda boobka ku sifawday ee dalka ka socota, iyadoo qorshahooda koowaad uu yahay sidii ay gudaha caasimadda ugu soo dhaweyn lahaayeen ciidamada badbaado qaran, ee ku sugan saldhigyada Shabeelooyinka ay ku leeyihiin CQS.
Tuuryare oo wada hadalkooda kadib, qoraal kooban soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebooga, ayaa sheegay in kulankooda uu daarnaa, sidii ay u badbaadin lahaayeen dalka, oo iminka ku sugan xaalad aad u cakiran, waxana uu tilmaamay in dhaba kasta ay u marayaan joojinta waxa socda ee magaca doorasho huwan.
Kulanka Xaaji Muuse Suudi iyo Jeneral Tuuryare, ayaa noqday mid hadal heyn badan ka dhex abuuray gudaha Muqdisho, maadaama ay hore kaalin muuqata ugu laahaayeen labadoodaba, imaanshihii ciidamada badbaado qaran oo iyagoo hor kacaya Muqdisho soo galay dabayaaqadii bishii April ee sanadkan, xilligaasoo ay ka dhiidhinayeen muddo kordhin sharci darro ah oo uu sameystay Farmaajo.
Xaaji Muuse Suudi oo ka mid ah hoggaamiyayaasha bulshada dagta Muqdisho, xubina ka ah Gollaha Aqalka Sare, ayaa ah nin xog oggaal u ah dhagarta Farmaajo Iyo Fahad, waana tan keentay in ay cabsi ka muujiyaam Senatarka, iyagoo hore ugu guul dareystay inay afduubtaan kursiga uu Aqalka Sare ku lahaa Xaajiga.
Cali Yare Cali, oo ah Gudoomiye ku xigeenka amniga Gobolka Banaadir, ahna nin si indha la'aan ah ugu adeega dannaha Farmaajo, ayaa qoraal digasho ah oo uu la wadaagay asaxaabtiisa Facebooga ku tilmaamay, kulanka labada dhinac mid la yaab leh.
Waxana isagoo weeraraya Xaaji Muuse Suudi iyo Tuuryare, uu sheegay in ay yihiin rag aan looga barran ka shaqeynta caddaalada iyo Dowladdnimada, iyadoo badi dadka qoraalkaas ka aragti celiyeyna ay hadalkiisa ku macneynayeen mid Madaxtooyada looga soo dhiibay.